China Umgangatho ophezulu we-L-CitrullineCAS: umzi-mveliso we-372-75-8 kunye nabathengisi | Binshare
Umgangatho ophezulu we-L-CitrullineCAS: 372-75-8
I-crystal emhlophe okanye i-crystalline powder. I-Soluble emanzini, ingenakunyibilika kwi-methanol, i-ethanol kunye ne-ether. Inokuchaphazeleka kwisisombululo sayo esixineneyo nge-phosphotungstic acid kwaye isonjululwe ngesisombululo sealkali egxile ekwenzeni i-ornithine, icarbon dioxide kunye neammonia.
Igama lesiNgesi: L (+) - Citrulline
Indawo yokunyibilika: 214 ° C
Ujikelezo oluthile: 25.5 ° (C = 8,6NHCl)
Indawo yokubilisa: 306.48 ° C
Isalathiso sokubonisa: 26 ° (C = 8,6mol / LHCl)
Imeko yokugcina: STOREAT 0-5 ° C
Umlingani we-Acidity: (PKA) 2.43 (AT25 ℃)
Ukunyibilika kwamanzi: 200g / L (20 ° C)
I-crystal emhlophe okanye i-crystalline powder. I-Soluble emanzini, ingenakunyibilika kwi-methanol, i-ethanol kunye ne-ether. Inokuchaphazeleka kwisisombululo sayo esixineneyo nge-phosphotungstic acid kwaye isonjululwe ngesisombululo sealkali egxile ekwenzeni i-ornithine, icarbon dioxide kunye neammonia. Ityuwa yobhedu yikristale eluhlaza okwesibhakabhaka enendawo yokunyibilika ye-257-258 ℃. Indawo yokunyibilika kwehydroxide yayo, iChemicalbook185 ° C (ukubola), ingama-17.9 ° emanzini [α] D22. Ifunyenwe kwiivatala ezifana neevatala. Emntwini, i-citrate yi-nonprotein amino acid engathathi nxaxheba kwiprotein synthesis, kodwa inesakhono sokwenza iibhondi zep peptide. Kwakukade kucingwa ukuba ikhona kuphela njengesixhobo esiphakathi somjikelezo we-ornithine-urea.
Iimpawu zeMichiza: I-White crystalline powder
Sebenzisa: 1.L-uhlobo arginine lwalungiswa njengophakathi we-NOx ngu-NO synthase
Iziphumo eziphambili ze-citrulline L- citrulline:
1. Ukuphucula amajoni omzimba.
2. ukugcina umsebenzi wokuhamba ngokudibeneyo.
3. Balance amanqanaba eswekile yegazi eliqhelekileyo.
4.tyebile ekufunxeni i-antioxidant ye-Chemicalbook eyingozi.
5. Inceda ukugcina amanqanaba e-cholesterol eqhelekileyo.
6. Gcina umsebenzi wemiphunga weJiankang
7. Ukuphucula ukucaca kwengqondo
Nciphisa uxinzelelo kwaye woyise uxinzelelo
9. ukuphucula ukusebenza kobomi bezesondo jiankang
Ukusebenza kunye nokuSebenza: ICitrulline yi-nonprotein amino acid enesakhono sokwenza iibhondi zep peptide kodwa engathathi nxaxheba kwiprotein synthesis. ICitrulline yayiye yathathelwa ingqalelo njengemveliso ephakathi yomjikelo we-urea umjikelo weChemicalbook ring. Nangona kunjalo, uphononongo lwakutsha nje lubonakalisile ukuba i-citrulline inokusetyenziswa ngokubanzi kunyango, ukutya, ukhathalelo lwempilo kunye nezinye izinto, kwaye ineziphumo ezilungileyo ze-pharmacological.
Egqithileyo Ukhuphiswano lwe-Isotonitazene CAS: 14188-81-9
Okulandelayo: Ukuhambisa ngokukhawuleza iMicrocrystalline CelluloseCAS: 9004-34-6